Izu anụ zuru oke (ya mere nro & nri!) - Ezi Ntụziaka
oji na nkpuru uzo na ime ikuku fryer Ezi ntụziaka
ị nwere ike ifriizi hash aja aja casserole
ọdịiche dị n'etiti agwa mmiri na agwa ugwu
Izu zuru okè
Onye ọ bụla na-esi nri nke ụlọ ọ bụla kwesịrị ịnwe usoro nhazi oge ochie maka ịmịcha ite eji gravy, karọt, na poteto!
Zoro ndagwurugwu ebe ana-azu umuanu inine artichoke itinye
Ntụziaka a dị mfe dị mma maka ndị mbido ma na-anapụta nsonaazụ dị egwu n'oge ọ bụla! Achịcha anụcha bụ anụ amịrị dị ọnụ ala nke na-esi nri na oven na obere okpomọkụ maka awa ole na ole. Gbakwunye na ole na ole nke veggies na ụfọdụ osisi na-atọ ụtọ maka nri zuru oke.
Yiri Mississippi ite anụ nke emere na cooker nwayọ nwayọ, a na-eme ite a n’ọkụ, ma a na-eghekwa ya n’ọkụ emere na ite ozugbo ma oburu na inwere otu!
nwuo n'ọchịchịrị na-a nonụ mmanya
Ighe anụ bụ ọkacha mmasị n'ezinụlọ ọ bụla! Ọ bụghị naanị na ọ dị mfe ijikọ ọnụ, mana ọ na-eme nnukwu ite sandwiches dị ka ihe fọdụrụ, ma ọ bụ tinye n'ime akwa ma ọ bụ pita. Nye usoro nri a na-enye obi ụtọ ma na-enye obi ụtọ gwere poteto na akụkụ nke arụrụ n'ụlọ garlic achịcha .
Gịnị bụ ite anụ?
Nke a bụ culinal kpochapụwo yana ezigbo ihe kpatara ya!
Ighe anụ bụ anụ amịrị nke na-abụkarị nsogbu siri ike. Isi nri na obere okpomọkụ ruo ogologo oge na-agbaji nsị njikọ siri ike nke na-eme ka anụ bekee dị nro nwere ụtọ gravy.
Ezigbo nhọrọ maka ite anụ n’ọkụ gụnyere anụ amịkpọ (nhọrọ m masịrị m), anụ ọkụkọ ma ọ bụ ọganị
Anụ ahụ anụla, gbara ya na karọt, eyịm, yana njupụta nke ahịhịa na ngwa nri ma sie ya ruo mgbe agbazere n’ọnụ gị dị nro.
ham na oka chowder ngwa ngwa osi ite
Etu esi esi nri ite
SEAR Add oil to the pan and sear chuck roast in oil (anụ ezi anụ ezi ka mma ma ọ bụrụ na ị nwere ya!) Ruo mgbe ọ ga-acha nchara niile.
Tinye agba Debe eyịm gburugburu anụ ahụ ma gbakwunye mmanya, broth, rosemary, na thyme. Da na simmer ma akpọọ nkụ awa abụọ na oven.
Tinye VEGGIES Add nduku na carrots na akpọọ nkụ ruo mgbe poteto dị nro, ihe dị ka awa abụọ ọzọ. Wepu akwukwo mmiri.
Na-eje ozi Bee anụ ahụ n’ime obere mpekere ma ọ bụ jiri mkpịsị ụkwụ abụọ wee jee ozi.
Ogologo oge ka esi esi nri
Ntụziaka a dabere na anụcha anụcha, ihe dịka 4lbs (nye ma ọ bụ were). A na-eme ka ite anụ ọkụkụ na-eme ka ọ sie ike na obere okpomọkụ ruo ogologo oge iji mebie anụ ahụ ọ bụla siri ike.
Esi nri 3lb anụ maka 3-3.5 elekere
Esi nri anụ 4lb maka oge 3.5-4
Esi nri anụ 5lb maka oge 4.5-5
Oge nri nri nwere ike ịdị iche na-adabere n'ụdị anụ ahụ. Lelee anụ ahụ na ndụdụ, ọ bụrụ na o siri ike, anụ ahụ nwere ike chọrọ ỌZỌ oge esi nri. Kpuchie ya azụ wee hapụ ya ka ọ na-esi nri.
Etu esi eme ite ite
Ngwurugwu a dị oke mfe ma dịkwa ụtọ, naanị na usoro 3!
-esi mee french yabasị ofe na-enweghị oven mma ọkwá
Ghichaa okpukpu abuo nke oka starch na mmiri oyi ruo mgbe o di ire (a na-akpọ ya slurry ).
Wepu beef na veggies ofe ma mee ka o sie. Ikwesiri inwe ihe dị ka iko abụọ, tinyekwuo anụ ehi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ghichaa slurry n'ime broth na-eme ka o sie ike.
Ndụmọdụ zuru oke
Họrọ achicha nwere ọtụtụ ịlụ ọgụ na ya -bụ nke na-ebu ekpomeekpo ma nyere aka mee ka ahịhịa na-asọ mmiri ọnụ!
Baby poteto bụ oke nhọrọ. Ha anaghị achọ peeling ma jigide ọdịdị ha nke ọma (russet poteto na-ada ada, ọ bụ ezie na ha ka na-atọ ụtọ nke ukwuu)
Bee ihe karọt na celery ntakịrị ka ha ghara ichi
Ogwu ohuru di nma ma enwere ike iji ya mee ihe, jiri ya nwayo ebe obu na ahihia ahihia nwere ekpomeekpo kari nke ohuru.
Add 2 tablespoons tomato mado na efere ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Nri Na-amasị Arụ Anụ Mara Mma
Nri anụ ehi
Atụmatụ anụ & Nri
Mfe Anụ Anụ Stroganoff
Anụ ehi roulades
Ngwa ngwa Barbacoa Amịrị
You mere Chuck Soast a? Jide n'aka na ịhapụ okwu na ọkwa n'okpuru!
5site naOgbe 86votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe25 Nkeji Oge nri4 awa 10 Nkeji Oge zuru ezu4 awa 35 Nkeji Ọrụ8 servings Onye edemedeHolly Nilsson Achịcha ite a zuru oke ma jikwa ya na akwụkwọ nri dị nro! Bipute Ntụtụ
▢3-4 paụnd Chuck anụ ma ọ bụ Akụkụ ike
▢1 buru ibu yabasị chopped, ma ọ bụ obere eyịm abụọ
▢4 karọt bee n'ime 2 'iberibe
▢abụọ stalks celery bee n'ime 1 ½ 'iberibe
▢1 paụnd nwa poteto
▢1 iko mmanya uhie
▢abụọ iko beef efere ma obu dika odi nkpa
▢4 mkpụmkpụ galiki coarsely chopped
▢½ ngaji rosemary
▢½ ngaji thyme
▢1 n'ọnụ mmiri akwukwo
Oge nnu na nnu.
N'ime nnukwu oven, kpoo 1 tablespoon mmanụ oliv n'elu ọkụ-ọkụ. Chọọ anụ ahụ n'akụkụ ọ bụla ruo mgbe agba aja aja, ihe dị ka nkeji 4 kwa akụkụ na-agbakwunye mmanụ ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
N'Usoro eyịm gburugburu anụ. Ikpokọta mmanya, broth, rosemary, garlic, na thyme. Wụsa anụ ahụ. Add n'ọnụ mmiri akwukwo.
Weta na ịmị ọkụ n’elu stovu n’elu nnukwu okpomọkụ. Ozugbo ofe na-smmering, mkpuchi na-etinye na oven na akpọọ nkụ awa 2.
Tinye poteto, karọt, na celery, ma ghee awa 2 ọzọ (maka anụ 4lb) ma ọ bụ ruo mgbe anụ na poteto dị ndụ.
Tụfuo akwukwo akwukwo. Jiri nwayọ dọpụta amịrị n'ime nnukwu iberibe na ndụdụ ma ọ bụ bee n'ime iberibe iberibe. Iri mmiri na juices (ma ọ bụ mee gravy n'okpuru ma ọ bụrụ na achọrọ).
Iji Mee Gravy:
Gwakọta ntụ ọka ntụ ọka abụọ na 2 tablespoons mmiri oyi ruo mgbe ọ ga-adị ire ụtọ.
Wepu ehi na akwukwo nri n’ime ite ahu ma dobe ya n’elu efere ka o zuru ike. Tinye broth ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Weta ofe na obụpde ma hichaa ngwakọta ọka ọka ntakịrị ruo obere oge.
Oge na nnu & ose nụrụ ụtọ.
Calorisị:579,Carbohydrates:22g,Protein:47g,Abụba:31g,Abụba Ajuju:12g,Cholesterol:Ogbe 156mg,Sodium:377mg,Potassium:1491mg,Eriri:3g,Sugar:4g,Vitamin A:6883IU,Vitamin C:iri abụọmg,Calcium:Ogbe 79mg,Iron:6mg
Isiokwukasị mma ite anụ uzommeputa, Chuck anụ, chuck anụ uzommeputa, esi mee ka ite anụ, ite anụ, ite anụ Ntụziaka N'ezieAnụ ehi, Nri abalị, Entree, Isi Agụmakwụkwọ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .